१८ वर्षमा फर्किए घर - जीवन संघर्ष - साप्ताहिक
१८ वर्षमा फर्किए घर
- रत्नबहादुर बस्नेत
दुई छोरी, दुई छोरा तथा एक श्रीमती रहेका रामप्रसादका एक छोरा बाहेक बाँकी अरूको विवाह भैसकेको छ । उनी घर छोडेर हिँड्दा उनकी कान्छी सन्तान (छोरी) को उमेर केवल तीन वर्ष थियो भने अरू पनि सानै थिए । माया मारिसकेका बुबा घर फर्किएपछि परिवारमा खुशीयाली छाएको छ भने छरछिमेकी पनि चकित भएका छन् । अहिले रामप्रसाद सेतो वस्त्र लगाएर पितृ शोक मानिरहेका छन् ।
रामायणअनुसार त्रेता युगमा भगवान् राम १४ वर्षको वनबासपछि अयोध्या फर्किएका थिए । उनी माता कैकेयीको इच्छा र बाबु दशरथको आज्ञापालन गर्न वनबास गएका थिए, तर झापाको बिर्तामोड–३ निवासी रामप्रसाद चौलागाईं १८ वर्षपछि प्रवासबाट घर फर्किएका छन् । उनले कसैको इच्छा वा आज्ञापालनका लागि अठार वर्ष बिना कुनै खबर प्रवासमा बिताएका होइनन् । वि.सं. २०५७ मा बिदेसिएका रामप्रसाद केही दिनअघि मात्र घर फर्किएका हुन ।
संयोगवश चौलागाईं यस्तो दिन टुप्लुक्क आइपुगे जुन दिन उनको पिताको अन्त्यष्ठी क्रियाको तेह्रौं दिन थियो । साधु–संन्यासीको भेषमा साँझपख उनी बिर्तामोड–९ कोलाटोली स्थित मूल घर आइपुग्दा उनलाई हेर्न गाउँलेहरूको ठूलै भीड लागेको थियो । १८ वर्षअघि युवा अवस्थामा कमाइ गर्न परदेसिएका चौलागाईं साधु भेषमा यसरी फर्किएलान् भनेर कसैले अनुमानसम्म गरेका थिएनन् । लामो दाह्री र पहेलो पीताम्बर धारण गरेका तथा हातमा त्रिशुल र कमण्डलु बोकेर ‘जयश्रीराम’ भन्दै हिँडेका रामप्रसाद लामो समयपछि यति बेलै किन फर्कनुभएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा भन्छन्, ‘पितृले बोलाए, यो पितृको कृपा हो ।’ गत पुसमा ९६ वर्षको उमेरमा उनका पिताको निधन भएको थियो ।
रामप्रसाद भन्छन्— मेरो विषयमा चिन्ता बढ्ला भनेर मैले कसैलाई खबर गरिनँ । दिल्ली भन्दा एक दिन एकरात टाढा रेलको बाटोमा पर्ने अजमेरबाट यहाँ आइपुगेको बताउने रामप्रसादलाई स्थानीय सैनिक बजारसम्म आइपुग्दा कसैले चिन्न सकेका थिएनन् । ५१ वर्षीय चौलागाईंलाई केवल एक महिला पसलेले बोलचालपछि चिनेकी थिइन् ।
उनी पहिलो पटक भारत गएर उतै भासिएका भने होइनन् । रामप्रसाद बेखबर हुनु अघि छ महिना भारत बसेर घर फर्किएका थिए । त्यसको केही समयपछि पुन: भारत गएपछि भने उनी बेपत्ता भए । कसरी बित्यो त करिब दुई दशक लामो समय भारतमा ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा चौलागाईंले भने— आठ वर्ष काम गरें भने बाँकी १० वर्ष साधु संन्यासीका रूपमा बिताएँ । त्यस क्रममा उनले सम्पूर्ण भारत पुगेको अनुभव सुनाए ।
यतिबेला उनका एक छोरा विदेशमा छन् भने अर्का छोरा व्यापारमा संलग्न छन् । अब कतै नगै बाँकी जीवन पारिवारिक रुपमा बिताउने रामप्रसादको मनसाय छ ।
रजत वर्षमा प्रवेश गरेको साप्ताहिकलाई के भन्नु छ ?
नयाँ वर्षमा कहाँ घुम्ने सोच छ?
दसौं वर्षमा स्प्यारो एसएमएस
क्रिसमस र नयाँ वर्षमा रम्दै लन्डनबासी नेपाली
चार वर्षमा १४ हजार लागूऔषध कारोबारी पक्राउ
नवौं वर्षमा सस: द नेवा:
जीवन संघर्षबाट अरु
किरिया गरिसकेका व्यक्ति जिउँदै फर्किएपछि... माघ ६, २०७५
पलका डेब्यू निर्देशक श्रावण २, २०७५
पारिवारिक विघटन र अपराधको स्रोत बन्दै वैदेशिक रोजगार माघ ५, २०७३
वाइड एंगलमा ट्रिपल मंसिर ६, २०७३
नौ लाख तारासँग रमाउँदै अम्बर जेष्ठ ३०, २०७३
एउटा गोरखालीको वीरगाथा जेष्ठ १६, २०७३
महिला हेलिकप्टर पाइलटको खुसी असार ६, २०७१
भाग्यबाट ठगिएका चिरनले समाज बदले जेष्ठ २३, २०७१
युद्धबाट नयाँ जीवन पाएकी राधा वैशाख २६, २०७१